Qaabkeenna - Ka-qaybgalka Sinnaanta Caalamiga ah
Qaabka Isdhaxgalka: Xal u helidda Bulsho-Wadaha
Waxaan isku daraynaa ka qeybgalka tooska ah ee bulshada iyo warbaahinta kaqeybqaadata iyo tikniyoolajiyada. Mashaariicdayada waxaa loo qaabeeyey mudnaanta, khibradaha, fikradaha, iyo xalalka bulshooyinka aan la shaqeyno. Barnaamij kasta wuxuu leeyahay qodobo taabasho dhowr ah oo taabanaya xalalka bulshada iyo ra'yi celinta. Tan waxaan ugu yeernaa a loop jawaab celin guud.
si toos ah Community Engagement
Kaqeybgal Warbaahinta & Technology
Cilmi baarista Qaabka
Tallaabada koowaad ee muhiimka ah ka hor intaanan bilaabin barnaamijyadayada. Waxaan eegnaa dabeecadaha, dabeecadaha, iyo caadooyinka bulshada ee bulshooyinka maxalliga ah annaga oo adeegsanna qaabab kala duwan oo xog aruurin ah. Dhanka EAI, talaabadan ugu horeysa waxay naga caawineysaa inaan dhisno iskuxirid iyo wada shaqeyn aan laqeyb galno jaaliyadaha aan wada nooshihiin.
Waxaan soo aruurinaa wakiilo muhiim ah iyo shaqsiyaad saameyn doona oo saameyn doona qaabeynta barnaamijkeena. Waxaan abuurnaa nidaam lagu quudiyo wax soo saareyaasha saamileyda loogu talagalay qaabeynta barnaamijka iyo ka-qeybgalka inta barnaamijka socdo.
Habka lagu qalabeeyo shaqsiyaadka iyo jaaliyadaha fahamka, xirfadaha, iyo marin u helka macluumaadka, aqoonta, iyo tababbarka u saamaxaya inay noqdaan kuwo firfircoon oo muwaadiniin xog-ogaal ah oo doorka hoggaamineed ka qaata bulshadooda. Tan waxaa ku jira horumarin shaqsiyeed iyo mid xirfadeed.
Iskaashi Isgaarsiinta barnaamijyada
Barnaamijyada Isgaarsiinta Wada-abuurka ah
EAI waxay la shuraakoobaysaa bulshooyinka iyadoo loo sii marayo kooxaha La talinta Waxyaabaha, Dhageysiga, Dooda, iyo Kooxaha Waxqabadka, iyo qaabab kale oo loo qoro loona soo saaro warbaahinta kuwaas oo si gaar ah uga tarjumeysa waaya aragnimada bulshada. Kooxahani waxay sare u qaadayaan awooddeena si aan u kordhinno aragtida bartilmaameedka iyo isbedelka dhaqanka, waxay ka caawiyaan yareynta dib u dhaca ku yimaada arrimaha xasaasiga ah, waxayna abaabulaan ficil maxalli ah.
EAI waxay naqshadeysaa barnaamijyo leh dhibco badan oo isugeyn ah oo loogu talagalay jawaab-celinta bulshada sida jawaabta codka dhexgalka ah; codaynta iyo sahaminta ay sameeyeen cilmi baadhayaasha bulshada; Xirmooyinka warbaahinta ee ay soo saareen wariyeyaasha bulshada iyo looxyo kale oo qaabeysan oo loo celiyay Waxaan aaminsanahay in beeluhu ay leeyihiin xalka dhibaatooyinkooda.
Adoo abuuraya xalka xaafadaha barnaamijyadeena waxay kordhinayaan raasamaal bulsheed, xoojinta, iyo hogaaminta hogaaminta soo ifbaxayaasha jilayaasha cusub si geesinimo leh u hogaaminaya arimaha bulshada iyo ficilada muhiimka ah.
Barashada & Laqabsashada
Barashada & La Qabsiga
Laqabsashadu waa udub dhexaadka barnaamijkeena. Waxaan u adeegsanaa xogta sahanka, aaladaha qiimeynta, kulamada milicsiga, wareysiyada qoto dheer, bulshada, iyo jawaabcelinta fududeeyaha, iyo xogta tijaabada ah ee la xakameeyay si aan si joogto ah u qiimeyno una wanaajiso barnaamijyadeena. Iyada oo la abuurayo barashada waqtiga-dhabta ah iyo loo-celinta jawaab-celinta, waxaan u qaabayn karnaa qaab ahaan oo aan ula qabsan karnaa sida loogu baahan yahay si loo gaaro yoolalkayaga.
Dib u eegista Suugaanta / Dhibaatada iyo Falanqaynta Mawduuca
Ka -qeybgale Kaqeybgal iyo Wareysiyada Ifiican
Qiimaynta Isbahaysiga sida iskaashiga iyo muuqaalka shabakad
Kulamada Waxqabadka iyo Wadatashiga Wadaagga
Kooxaha La-Talinta Waxyaabaha
Shuurada iyo qaababka dhaqameed ee isu imaatinka bulshada
Xeryaha Teknolojiyada iyo Hackathons
Tababarka U doodista
Aqoon isweydaarsiga Hoggaanka iyo Awood-siinta
Kaqeybgalka tababarka M&E
Tababarka lamaanaha iyo ka qeyb galka
Tababbarka Sahanka Warbaahinta Bulshada
Qorsheynta Isgaarsiinta Istaraatiijiyadeed / Horumarinta Ololaha
Tababarka Kobcinta Mawduucyada
Qorista Qoraalka iyo Tababarista Saxafiyiinta
Barnaamijyada Iskaashatada Wada-abuurka ah
Sheeko Wadahadal iyo Subax
Filimaanta Filimaanta iyo Naxwaha
Taxanaha Telefishanka Asalka ah
Ololayaasha Warbaahinta Dijital ah iyo Magacaabista
Jawaabta Codsi Isdhaxgalka ah (IVR)
Raadiyo Telefishanka iyo Telefishanka
Riwaayadaha iyo Ciyaaraha
Wadahadalka Wax Barashada iyo Kooxaha Waxqabadka (LDAGs)
Adeegsiga Kheyraadka Dadweynaha iyo Adeegga Iibinta Agab
Aasaasidda Kooxo Bulsho
Saldhigga, Bartamaha, Sahammada Qadka
Aaladda Korjoogteynta & Qiimeynta
Habraacyada, Istaraatiijiyadda iyo Dib-u-eegista Qaabka
Dib u eegista iyo Kulamada Shirarka
Kaqeybgalka Kaqeybgalka Bulshada iyo Qiimaynta
Tijaabooyinka Baaritaanka Random (RCTs)
Waxaan u soo qaadeynaa qaabkeena nolosha iyada oo loo marayo hababkan
Isgaarsiinta Isbedelka Bulshada iyo Dhaqanka (SBCC)
Waxaan ognahay in istiraatiijiyadaha wada-xiriirka wanaagsani ay dhiirigeliyaan ficillada shakhsiga, bulshada, iyo heerarka dowladda. Anaga ahaan, dhiirigelintu waa xuddunta ugu weyn ee isbedelka bulshada iyo dhaqanka.
Waxaan sameyneynaa wax ka badan si sahlan oo loogu wargaliyo dhagaystayaasheena, waxaan ka caawinaa iyaga inay horumariyaan xirfadaha iyo dhiirigalinta ay ku kobcinayaan isbadalkooda. Si tan loo sameeyo waxaan adeegsanaa habab kala duwan, oo ay kujirto dhageysiga, wada hadalka, iyo kooxaha waxqabadka; xirfadaha nolosha iyo tababarka awoodsiinta dhalinyarada; shirarka hoolka shirarka bulshada; iyo riwaayado ku saabsan masraxa wadada.
Waxaan u wajaheynaa SBCC si dhameystiran hadafkeena oo ah dhiirigelinta isbedelka shaqsiyaadka iyo bulshada iyadoo lagu darayo qoysaska, asaaga, hogaamiyaasha maxaliga ah, iyo dowlada. Markaan la shaqeyno dhammaan nidaamka deegaanka ee ku xeeran oo saameyn ku leh nolosha qofka, waxaan dhiiri gelinaynaa isbedelada wanaagsan ee ay wadaan baahiyaha dhabta ah isla markaana socon kara muddada dheer.
Hantida iyo Barnaamij-ku-saleysan Himilo
Qaabka aan u xoojineyno waa mid ku habboon horumarka dhallinyarada oo wanaagsan waxaana lagu fidiyaa dhammaan barnaamijyadayada caalamiga ah. Waxaan ilaalinaynaa in shaqsiyaadka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa halista ku jira iyo dhalinyarada nugul ama kuwa fikradaha iska caabinta ama "xagjirka ah", ay leeyihiin hanti lagu bixin karo laguna jiheyn karo natiijooyinka wanaagsan.
Natiijo ahaan, habkayaga firfircoon ee ka hortagga iyo ka-hortagga xag-jirnimada rabshadaha leh wuxuu aqoonsan yahay, xoojiyaa, oo marin u siiyaa hantida shakhsiyaadka oo dhan - sida wakaaladda, ballanqaadka, hoggaaminta, iyo is-wax-ku-oolnimada - oo tilmaamaysa waddooyinka bulshada ee wanaagsan ee ka caawinaya dib u habeynta himilooyinka dhalinyarada, dabeecadaha, iyo dabeecadaha ka fog rabshadaha iyo ku wajahan awoodsiinta bulshada.
Waxaan ka caawineynaa bulshada inay ku xiraan xirfadahooda cusub ilaha iyo fursadaha ka caawiya bulshada inay ka gudbaan ka saarista bulshada iyo faquuqa. Iyadoo aan la helin fursadahaas guusha iyo koritaanka heerarka maxalliga ah iyo kuwa gobollada, dhallinyardu waxay u badan tahay inay ku lug yeeshaan dhaqan is-baabi'in iyo qatar ah oo ay la galaan baandooyinka, shabakadaha dambiyada, ama kooxaha mucaaradka ee hubeysan.
Adduunyo halkaas oo dhalinyarada iyo bulshooyinka nugul inta badan lagu qeexo qatarta ay leedahay, dadaalkayagu wuxuu xoojinayaa hantida dhalinyarada, hay'ad foster ah, xoojinaysa jawi karti leh, iyo xoojinta awooda la taaban karo ee maxaliga ah ee isbedelka bulshada.
Isbedelka Caadiga ah
Waxaan fahamsanahay caadooyinka bulshada inay yihiin qaanuunada u sheegaya bulshada ama bulshada dabeecadaha la rajeynayo ama la oggol yahay. Tan waxaa ka mid ah aragtidayada sida dadka kale ee bulshada u dhaqma (waxay u maleynayaan inay kuwa kale sameyn doonaan) iyo sida aan u maleyno inay dadka kale naga filayaan inaan u dhaqano (waxaan aaminsanahay inay kuwa kale naga filayaan inaan sameyno).
Caadooyinku waxay si qoto dheer ugu xidhan yihiin dharka bulshada oo ay meeleeyaan kooxo saamayn ku leh, sida asxaabta, xubnaha qoyska, iyo hoggaamiyeyaasha bulshada. Sidaasoo kale badanaa waa kuwo aan la aqoonsan oo si adag caan u ah in la beddelo. Waxaan higsaneynaa inaan ka hortagno caadooyinka jira iyo dabeecadaha xun ee jira anagoo tusaale u soo qaadanayna kuwa wanaagsan. Waxaan tan ku samaynaa ugu horrayn annagoo u sii maraya raadiyaha, TV-ga, aaladaha wadahadalka bulshada, iyo masraxa mobilada, laakiin sidoo kale annaga oo iskaashi la samayna hoggaamiyeyaasha iyo dadka raad ku leh bulshada kuwaas oo badiyaa ilaaliyayaasha dhaqanka aan isku dayeyno in aan wax ka qabanno.
Waxaan dhiiri gelinaynaa milicsiga iyo wada hadalka, abuurista meel aamin ah oo caadooyinka wax laga weydiin karo iyo dabeecado cusub lagu dhaqmo. Sidan, waxaan saameyn ku leenahay aaminsanaanta wadajirka ah ee horseedaya caadooyinka bulshada iyadoo la guda galayo isla markaana faafinaya caadooyin cusub, oo ka sii wanaagsan oo loo maro kooxahayaga ku saleysan bulshada.
Kala shaqee EAI si loo ballaariyo caddaynta isbeddelka caadooyinka iyo barnaamijyada ku saleysan hantida.